သူတို့အာဘော် | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 91
အောက်တိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂ အခုခေတ် ကောင်မလေးတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ အရုပ်မလေးတွေလို ဘာဘီရုပ်တွေနဲ့ မတူတူအောင်ကို ပြင်ဆင်လာကြတာ။ အ၀တ်အစားပိုင်းတင် မဟုတ်ဘူး။ အသားအရေပိုင်းအတွက်လည်း တော်တော် ဂရုစိုက်လာကြတယ်။ ကိုရီးယား brand အသားဖြူဆေး No tags for this post.
ကျော်ဇောဦး (စစ်တွေ) အောက်တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၂ ကိုငြိမ်းမောင်* တစ်ယောက် အသစ်စက်စက်ဖွင့်တော့မယ့် AZG ရဲ့ “ရှုခင်းသာ” ဆေးခန်းကိုလာဖို့ ဖိတ်စာရထားတဲ့အတိုင်း၊ မနက် ကိုး နာရီလောက်မှာ ဆေးခန်းကိုရောက်လာတဲ့အခါ မနေ့ကအထိ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ ဖွင့်ပွဲအရေးအတွက်ပြင်ဆင်ရင်း စည်ကားနေခဲ့တဲ့ နှစ်ထပ် တိုက်အိမ်ကလေးဟာ သော့ခတ်ပိတ်လျက်သားဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ တိုက်ရဲ့ဝင်ဝအုတ်တိုင်မှာ အေသရီးဆိုဒ်စာရွက်တစ် ရွက် ကပ်ထားတယ်။ စာရွက်မှာရေးထားတာက “ဘက်လိုက်မှုရှိ၊ ပွင့်လင်း မြင်သာမှုမရှိ၊ ကုလား (ဘင်္ဂါလီ) အရေး ဆောင်ရွက်ပေးသော AZG (MSF) အား အလိုမရှိ” လို့ ရေးထားတယ်။ နောက်ထပ် ဆယ်မိနစ်လောက်ကြာတော့ လူလေးငါးခြောက်ယောက် ဆိုင်ကယ်နဲ့ရောက်လာပြီး တိုက်ရှေ့မှာရပ်နေတယ်။ ခဏနေတော့ အမျိုးသားတွေ အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ အရှိုရှိုရောက်လာကြတာ လူအယောက်နှစ်ဆယ်...
ကာလပေါ် ငရဲခွေးကြီးတွေ လွတ်နေသေး ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်၊ အောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၂ ( Myanmar Independence Journal ) ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း မြန်မာ အင်ဒီပဲန်ဒင့်ဂျာနယ်မှာ ဆန်းဆန်းထူးထူး စာတစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်ရတယ်။ တိုတို ပြောရရင် ဒီလိုဗျာ။ ဂျာနယ်ထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ စာက ဂျာနယ်တွေထဲ၊ သတင်းစာတွေထဲမှာ ဖတ်ရလေ့ မရှိတဲ့စာဗျ။ ရေးတဲ့သူက ထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဟောင်း “ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု”ဆိုတဲ့ ဧရာမကျမ်းကြီးကို ပြုစုခဲ့သူ။ သူ့နာမည်က ကိုအောင်ထွန်း။ ကိုအောင်ထွန်းကို စစ်အာဏာရှင် အစိုးရက တစ်ချိန်က ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်။ ချုပ်နှောင်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ထုံးစံ အတိုင်းပေါ့။ ညှဉ်းပန်းခဲ့တယ်။ နှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ အားလုံးပြီးတော့ ဆိုပါစို့ ။ ထုံးစံအတိုင်း...
အယ်ဒီတာ့လက်ရေး (၁၅) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမေရိကားက နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ် မောင်ရစ်၊ အောက်တိုဘာ ၅၊ ၂၀၁၂ ဇူလိုင် ၁၉ နေ့ကစပြီးတော့ နောက်ပိုင်း ဘယ်စာမှ မရေးဖြစ်တော့ဘူး။ သြဂုတ်နဲ့ စက်တင်ဘာ ၂ လ လုံးလုံးမှာ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံပွဲ အတွက် တောက်တိုမယ်ရ (TTMY) အလုပ်တွေ ၀ိုင်းကူလုပ်နေရတာနဲ့ စာလည်း မရေးဖြစ်၊ စာမူတွေလည်း မတင်ဖြစ်ဘူး။ အဲသည်အချိန်မှာ ရန်ကုန်က သန်းစိုးလှိုင်၊ ချင်းမိုင်နဲ့ မဲဆောက်က ရန်လိုကျွဲနဲ့ ကိုအောင်ထက်တို့က ဆက်ပြီး စာမူတွေ၊ သတင်းတွေ ဆက်လုပ်ပေးနေလို့ မိုးမခလည်း ဆက်ပြီး ရှင်သန်နေတယ် ဆိုကြပါစို့ရယ်။ ပင်တိုင်တွေဖြစ်တဲ့ တူမောင်ညို၊ ကူမိုးကြိုး၊ ဖိုးထက်၊ ဖိုးဇီးရိုး၊ ဇော်အောင်၊ မိုးမခအထောက်တော်တွေ၊...
လေဘေးထည် နိုင်ငံရေး ကေသွယ်၊ အောက်တိုဘာ ၃၊ ၂၀၁၂ အပြောင်းအလဲ တွေက၊ လေမုန်တိုင်း တခု လို။ ပြောရရင်တော့.. မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသ ကို တညတည်း နဲ့ မထင်မှတ်ထားပဲ ၀င်မွှေသွားတဲ့ နာဂစ် မုန်တိုင်းလိုပါပဲ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ နိင်ငံရေး နယ်နမိတ် တလျှောက်၊ တနှစ်လောက် အတွင်းမှာပဲ၊ မထင်မှတ်ရခက်.. ထင်မှတ်ရခက် စွာ၊ ၀င်ရောက်တိုက်ခတ် နေလေ ခဲ့ သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ တွေ့ဆုံမူ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အလှည့်အပြောင်း။ အဲ့ဒီနောက်မှာ၊ ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေ ကြီး၊ ဖွင့်ထွား စွင့်ကား လာခြင်း။ မကြောက်တရား တွေ ထမ်းပိုးလို့၊ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား များ။ အကြောက်တရားတွေ ခ၀ါချ နိုင်လာတဲ့၊ (ဒေါ်စုပြောသလို )တမိုင်လောက်ဝေး...
စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၂ ဒီ sex worker တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အခွင့်အရေးတွေပေးသင့်သလို့ တဖက်ကလည်း စည်းကမ်းတွေ ချသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ အခုဆိုလို့ရှိရင် အမမြင်ရသလောက်ကတော့ ဒီ sex worker တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာအခွင့်အရေးမှ မရှိဘူးပေါ့နော် ။ ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အနီးစပ်ဆုံး ထိုင်းနိုင်ငံမှာတောင်မှ ဒီ sexworker တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အခွင့်အရေးတွေ ပေးထားတယ်၊ တဖက်ကလည်း ထိန်းချုပ်ထားတာတွေ ရှိတယ်။ ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ရွှေမြစ်မခမီဒီယာ၊ စက်တင်ဘာ ၂၀ ကိုယ်ရှာတာက ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘဲ ရဲတွေအတွက်ဖြစ်နေတယ်၊ နေ့တိုင်း ဒီနေရာကိုရောက်ရင် ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဘုရားတပြီးလာနေရတယ်။ ၂၅ နှစ်ဝန်းကျင် ပြည့်တန်ဆာတဦး ရွှေမြစ်မခမီဒီယာ၊ စက်တင်ဘာ ၂၀ သမ္မတကြီးက မြန်မာအစိုးရဘက်က စမပစ်ဖို့ ပြောပြီးပေမယ့်...
“ဂုဏ်ယူဖွယ် အားတက်ဖွယ် ထင်ရှားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ” လို့ ဆိုပါလားဗျ တူမောင်ညို (၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်) (ကျနော်မိတ်ဆွေနဲ့ကျနော် “ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ (၆၇) ကြိမ်မြောက် ကုလ အထွေထွေညီလာခံမိန့်ခွန်း” အပေါ် ဆွေးနွေး အမြင်ဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ် ၊ မိတ်ဆွေ များလည်း စိတ်ပါ ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဖြင့် ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ဝေငှလိုက်ပါတယ်) ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ (၆၇) ကြိမ်မြောက် ကုလ အထွေထွေညီလာခံမိန့်ခွန်း ဖတ်ပြီးရောပေါ့။ ရုပ်သံမီဒီယာတွေကနေ လွှင့်ထုတ် ပေး သွားတယ်ဆို။ သူပြောတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ခင်ဗျား အမြင်နဲ့သဘောထားပြောပါဦး။ သူပြောတဲ့ စကားလုံးတွေကို သေချာနားထောင်တယ်၊ ဖတ်ကြည့်တယ်ဆိုရင် သူတို့သဘောထားကို အထင်းသားမြင်ရလိမ့် မယ်။ အပေါ်ယံကျကျသာ နားထောင်၊ ဖတ်ရှုကြတယ်ဆိုရင်တော့ အညှာလွယ်လွယ်နဲ့ သာဓုခေါ်လိုက်ကြမှာအသေအချာပဲဗျ။...
Page 91 of 101«1...8990919293...101»